जो तिहार मनाउन श्रीमती र छोराछोरीसंगै हिंडेका थिए ! | सुदुरपश्चिम खबर
जो तिहार मनाउन श्रीमती र छोराछोरीसंगै हिंडेका थिए !
बैतडी- दशरथचन्द राजमार्गअन्र्तगत पाटन नगरपालिका–८ खोड्पेमा बिहीबार राती बस दुर्घटनामा परी नौ जनाको ज्यान गयो भने ३४ जना घाइने भए । त्यसमा बैतडीका तीन, दार्चुला, कञ्चनपुर र कैलालीका २÷२ जनाको मृत्यु भयो ।
बैतडीका मृत्यु हुने सबै तीन जना एउटै गाउँका रहेका छन् । यस्तै सात जना घाइते पनि भए । उनीहरु तीनै जना दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ सित्तडका हुन्् । मृत्यु हुने तीनै जना २५ वर्षदेखि ३० वर्षमुनिका युवक छन् । मृत्यु हुनेमा दोगडाकेदार गाउँपालिकामा कार्यरत आन्तरिक लेखा परीक्षक कविन्द्रप्रसाद जोशी, नेपाल प्रहरीका जवान रणबहादुर चन्द र करनसिंह ऐरी छन् ।
मृत्यु हुने तीनै जनाका श्रीमती र छोराछोरी पनि सँगै बसमै सवार थिए । उनीहरु घाइते अवस्थामा बाचेका छन् । तीन जनाको मृत्यु र सात जना घाइते भएपछि दोगडाकेदार गाउँपालिकाले दुख व्यक्त गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले एक शोक वक्तव्य निकालेर दुख व्यक्त गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “उक्त घटनाले गाउँपालिका परिवार मर्माहत र शोकमा डुबेको छ, मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलीका साथै घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ ।”
तिहारको समयमा भएको दुर्घटनाले जिल्लामै खल्लो वातावरण भएको छ । चाडपर्वको समयमा धेरै जना आफन्तहरुको भेटघाटमा गईरहेका थिए । यो घटनाले सबैलाई दुखित तुल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘चाडपर्वको बेला भएको दुर्घटनाले सबैलाई झस्काएको छ । ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाले सिंगो जिल्ला शोकमग्न भएको छ ।’
दुर्घटना परी बैतडीको दोगडाकेदार ६ सित्तडका २५ बर्षीय प्रहरी जवान रणबहादुर चन्द, दोगडाकेदार ६ सित्तडकै २७ बर्षीय करनसिंह ऐर, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कविन्द्र जोशी, कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका ८ तिलाचौरका १५ वर्षीया कृतिका कार्की र दार्चुलाको लेकम ४ का र्तकराज गिरीको मृत्यु भएको छ ।
दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका ५ का जगन्नाथ ओझा, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १० विजना धामी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका ४ का नरेन्द्र चौधरी र धनगढी उपमहानगरपालिका १८ का ऋषिराम चौधरीको पनि मृत्यु भएको छ ।
सो दुर्घटनामा परी घाइते भएका ३४ जनामध्ये गम्भीर घाइते १२ जनालाई धनगढी रेफर गरिएको छ भने बाँकी २२ जनाको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बैतडीको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदुत यातायातको ना ५ ख ५१४१ नम्बरको बस बिहीबार राती साढे १० बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो । सानो घुम्तीबाट बस ६ सयमिटर जति तल खसेको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन् । (manakamanadaily.com बाट साभार)